NaannooSomaaleettida’iimman umuriin isaanii filannoofi hin geenyee sagalee kennaniiru jedhame – ዜና ከምንጩ
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa filannoo marsaa lammaffaa Fulbaana 20 bara 2014 gaggeesseenkeessumaa naannoo Somaaleetti da’iimman umuriin isaanii hingeenye sagalee laachuu isaanii dhaabbanni falmaa mirgoolee namoomaa Itiyoophiyaa beeksise.
Filannoo gaggefamnee kana irratti taajjabduummaa dhaankanhirmaateeDhaabbanni falmaa mirga namoomaa kun naannichatti buufataalee filannoo garaa garaatti daa’imman umuriin isaanii hingeenye waraqaa sagalee kennu boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa qopheessee qabatanii sagalee yammu kennan taajjabdoonni arguu isaanii ibseera.
Ogeessi filannoo dhaabbatichaaGalawudiyoosGiruum Addis Maaladaatti akka isaaniittifilannoo marsaa lammaaffaatiin da’iimman Kaardii fudhatanii sagalee kennu isaanii taajjabdoonni dhaabbata falmaa mirgoolee namoomaa arguu isaanii ibsaniiru. Gohiichi naannolee filannoon itti gaggeeffamu kan birattis darbee darbe yoo jiraatus rakkinichi ol’aantummaadhaan kan mul’atee naannoo Somaaleetti ta’u Galaawudiyoos Addis Maaladaatti kan himan
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa ragaa kanaan dura baasuun fi barumsa filattootaa kennuun sagalee kennu yookan filannootti hirmaachuuf kan danda’u nama umuriin isaa waggaa 18 ol ta’e qofaadha jedhee ibsuun isaa hin dagatamu. Dhaabbatichi akka jedhutti taanaan garu rakkinichikan uumamee wayita filannaan duraa yammu ta’u filannichaan hirmaachuuf Kaardiin filannoo filattootaa yammu kennamu da’iimman umuriin isaanii hingeenyedarbarfamee kennamuu isaatiini jedheera.
Dhaabbanni falmaa mirgoolee namoomaa naannolee filannoon itti gaggefamee buufataalee filannoo taajjabduummaa dhaanhirmaateetti wantoota gaariifi hiriina argee boordii filannoofi gabaasa gochuu isaa ibseera. Dhaabbatichi buufataalee filannoo taajjabdoota itti bobbaaaseetti da’iimman filannoofi hingeenye hirmaachuuf isaanii kanmirkaneessuu ragaa fakkiidhiyeesseera.
Dhimmi filannoo naannoo Somaaleejalqabuma irraa jeeqaa akka ture kan yaadatamuu yammu ta’u filannoon naannichaa Waxabajjii 14 bara 2014 kan ca’ee naannichatti wayita dursa filannoo Kesuumaaakkaataa Kenninsa Kaardii filattootaa waliin wal qabatee rakkoo mudate tureedha.Bordiin filannoo Kaardiin filannoo rabsee karaa paartii badhaadhinaa naannichaa haala sirrii hintaaneen raabsamuu isaa paartileen siyaasaa morkattootafilannaa naannichatti hirmaachaa jiran komii dhiyeessuu isaaniitiin ture.
Rakkoo naannichatti mudateera jedhamee boordiin filannoo argee sirreessataasisuu ibsuun isaa kan yaadatamudha. Haata’u malefilannoo naannichatti gaggefamneen paartileen filannoo morkattoota hin hirmaannees. Paartileen filannoo sababiin isaan itti hin hirmaannees qophii filannoo marsaa jalqabaa irratti rakkooleen jira jedhanii dhiyeessan siraa’u dhabuu isaaniitiin ta’u ibsuun isaanii kan yaadatamudha.
Boordiin filannoo naannichatti filannoo bara 2014 gaggeesseebu’urefateefilannichaan kan moo’ate ifa taasisuun isaa kan yaadatamudha.Paartiin badhaadhinaa naannichaa morkataa tokko malee qofaa isaa yoo dorgomees mo’achuu isaa hordofee torbee darbee mootummaa naannichaa hunddeseera.Kanaaniis MusxxaffeeMohammad bulchaan bulchiinsa naannichaa taasiisefilateera.
Mootummaan naannichaa haaraa hundeeffame filannicha irraa kan of baasee adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeen miseensota lama kaabinee isaa keessagalchu ibseera .Haata’u male kaabinee naannichaa keessatti kan hirmaatan miseensota adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeen paarticha keessattigalfaman paarticha akka bakka hin buunee ragaa tooramarsariitii hawaasummaa isaatiin baaseen ibseera
Total views : 6982883